Mahatratra 100 miliara Ar ny faktiora tsy voaloan’ny mpanjifa amin’ny Jirama. Tafiditra ao anatin’izany ny orinasa, ny rafi-panjakana ary ny olon-tsotra. Tanjona ny hampihenana ny fatiantoky ny Jirama sy tsy hiantehitra intsony amin’ny fanampiana ara-bolan’ny fanjakana.
Manentana ny rehetra ny tale jeneralin’ny Jirama, hanondro ireo mpisintona herinaratra an-tsokosoko ivelan’ny kaontera. “Manodidina ny 20%-n’ny tanjaky ny herinaratry ny Jirama ny very angalarin’ireo mpangalatra herinaratra”, hoy ihany izy.
Nidina tany amin’ny Nosy Sainte-Marie ny Cnaps, nanazavana ny asany amin’ny fiahiana ara-tsosialy. Anisan’izany ny fanampiana ny mpiasa sy ny fianakaviana, ny vola ho an’ny bevohoka sy ny mpitaiza kely, ny solon-takaitra ho an’ny tra-doza amperinasa, ny fisotroan-dronono, sns. Nandritra ny dimy andro tany an-toerana, nananganana tranoheva tany Analarajy, Ambodifoatra, Vohilava, nanomezana fanazavana, fijerena ny kaontin’ny mpiasa. Tafatsangana koa ny klioba Cnaps zandriolona, miisa 100 avy amin’ny skoto any Sainte-Marie, ahitana Fanilon’i Madagasikara, Mpanazava, Tily sy Antily ary kiadin’i Madagasikara. Nomena tantsoroka koa ny mpampiasa any amin’ny Nosy Ile aux Nattes.